Mazita ane zita rokuti Gaur
Gaur zita rezita:
Kukosha Kubatana nemazita Kubatana nemazita ezita Mazita ane Gaur
Mazita akanakisisa, mazita anozivikanwa mazita okutanga ane zita rokuti Gaur.
Mazita anozivikanwa akawanda ane zita rokuti Gaur
Zvose mazita ane zita rokuti Gaur
Surnames nemazita evanhu vane zita rekuti Gaur
Zvimwe pamusoro pezita rokuti Gaur
Chii chinonzi Gaur chinorevei? Meaning of surname Gaur.
Gaur kuenderana nemazita
Gaur kuenderana kwekuedzwa nemazita.
Gaur kuenderana nemamwe mazita
Gaur kuenderana kwekuedzwa pamwe nemamwe mazita.
Mazita anoenda ne Gaur